YEYINTNGE(CANADA): Friday, June 18
The Voice Weekly Journal Vol. 6-31, June 21-27, 2010.
The Voice Weekly Journal Vol. 6-31, download hereVoice631
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/18/20100အကြံပြုခြင်း
18 June 2010 ဒိုင်ယာရီ
18 June 2010 yeyintnge Diary.doc file download here
18 June 2010 Yeyintnge Diary
Submitted by Karen Information Center on Friday, 18 June 2010
ဇွန်လ ၁၈ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ် မောခီးဂွင်၊ ကလော်ဝေါ်ကျေးရွာအခြေစိုက် နအဖ စစ်ကြောင်းတစ်ခုတွင် ယမန်နေ့က အချင်းချင်း ပြဿနာဖြစ်ပွားပြီး ပစ်ခတ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု ထိုဒေသမှလာသည့် သတင်းအရ သိရသည်။
ထိုနေ့မနက် ၁၁း၃၀နာရီခန့်တွင် ကလော်ဝေါ်ရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ စခန်းထိုင်သည့် စစ်ကွပ်ကဲရေးဌာချုပ်-စကခ(၈) လက် အောက်ခံ ခမရ(၄၀၇) စစ်ကြောင်း(၂)မှ ဒုရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးအောင်ဇော်မျိုးနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးမှူး တာဝန် ယူထားသည့် ဒုခွဲမှူး ဗိုလ်ကြီးမိုးအောင်ကျော်တို့ အချင်းချင်း စကားများကြရာမှ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကလော်ဝေါ် ရွာသားတစ်ဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “မနက် ၁၁း၃၀လောက်မှာ ဒုတပ်ရင်းမှူး အောင်ဇော်မျိုးနဲ့ ထောက်လှမ်းရေးမှူး မိုးအောင်ကျော် နှစ်ယောက်သား အ ပြန်အလှန် စကားများရာမှာ ထောက်လှမ်းရေးမှူးက ပစ္စတိုသေနတ်ကိုထုတ်ပြီး ပစ်ဖို့ချိန်တာ ဒုရင်းမှူးက သေနတ်ပြောင်းဝကို လက်နဲ့သွားပိတ်တော့ လက်ချောင်း(၄)ချောင်း ပြတ်သွားတာပေါ့။ တချက်တည်းပစ်တယ်။ အနားမှာရှိတဲ့ ရဲဘော်တွေက ၀ိုင်း ထုကြတော့ ထောက်လှမ်းရေးမှူး သတိလစ်မေ့မျောသွားတယ်”ဟု ပြောသည်။
၎င်းတပ်အတွင်း ပြဿနာဖြစ်လရသည့် အခြေခံအကြောင်းရင်းကို အတိအကျ မသိရသော်လည်း ပစ်ခတ်သူ ဗိုလ်ကြီးမိုး အောင်ကျော်ကို အပြစ်ပေးအရေးယူရန်အတွက် ဝေါ်လေအခြေစိုက် နည်းဗျူဟာ အမှတ်(၂)သို့ ထိုနေ့တွင်ပင် ပို့ဆောင်လိုက် ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိုဒေသတွင် လှုပ်ရှားနေသည့် ဒီကေဘီအေ တပ်မှူးတစ်ဦးက “ထောက်လှမ်းရေးမှူးက အဲဒီမှာရှိတဲ့ အခြေအနေတွေကို စုံ စမ်းရတာ။ စစ်ကြောင်းမှူးနဲ့ ဆက်နွယ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ပြောပြရာမှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အပြန်အလှန် စကားထိုး နှက်ကြရာကနေ ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တောင်ပိုင်း ကီလိုမီတာ (၁၇၆)အကွာအဝေးရှိ အုန်းဖန်မြို့နယ် ၀ါးကလုခိုကျေးရွာတဘက်ကမ်း ကလော်ဝေါ်ကျေးရွာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းတွင် ယခင်က ဒီကေဘီအေ(၉၀၇)တပ်ဖွဲ့ဝင်များ အခြေချလျှက်ရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ဧပြီလနှောင်းပိုင်း၌ အဆိုပါ နအဖစစ်တပ်က ၀င်ရောက်အခြေစိုက်ခဲ့သဖြင့် ဒီကေဘီအေတပ်များ ပြောင်းရွှေ့သွား ခဲ့ရသည်။
ထိုဒေသတွင် ယခုနှစ် မတ်လ ၁ရက်နေ့က တပ်အတွင်း အချင်းချင်း ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ခမရ(၄၀၆)မှ စစ်ကြောင်း(၂)မှူး ၀င်းကျော်သူနှင့် တပ်သား(၂)ဦး လက်နက်ခဲယမ်းတချို့နှင့်အတူ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ခြမ်းသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ရာ ထိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေး တပ်က ဖမ်းဆီးပြီး မိခင်တပ်ရင်းသို့ ပြန်ပို့ခဲ့သည်။
မြန်မာစစ်တပ် အနေဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အာခံနေသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ အပေါ် ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း ထက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကြံ့ဖွံ့ပါတီ အောင်နိုင်ရေးကို ဦးတည်လုပ်ဆောင်လာကြောင်း အကဲခတ်များက သုံးသပ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကို အားလုံးဝင်နိုင်ရေး ကနေဒါ တောင်းဆို
By ကိုဇော်ဝင်းလှိုင် သောကြာ, 18 ဇွန် 2010
အခုနှစ်အတွင်း စစ်အစိုးရက ကျင်းပပေးဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွတ်ပေးရေးအတွက် စစ်အစိုးရကို နေဒါနိုင်ငံက တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတွေကိုယ်တိုင် နေပြည်တော်မှာ သွားတွေ့ပြီး အခုလို ပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက အဲဒီ အရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုတော့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းလှိုင်က တင်ပြထားပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက အရာရှိနဲ့ သံရုံးအရာရှိတွေ ဒီကနေ့ မနက်ပိုင်းက NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးအိမ်မှာ သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာပါ။ စစ်အစိုးရက အခုနှစ်အတွင်းကျင်းပဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဟာ အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရေးအတွက် နေပြည်တော်မှာ စစ်အစိုးရအရာရှိတွေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် သူတို့ဖက်က တိုက်တွန်း ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း ကနေဒါအရာရှိတွေ ပြောတယ်လို့ ဒီကနေ့ ကနေဒါကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“ကနေဒါ သံအမတ် ၂ ယောက်နဲ့ ကျနော်ရယ်၊ ဦးတင်ဦးရယ်၊ ဦးဝင်းတင်ရယ် တွေ့ပါတယ်။ ဘန်ကောက်အခြေစိုက် သံရုံးက first secretary ပါတယ်။ နောက် ကနေဒါ အစိုးရ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက အမျိုးသမီးတယောက်ပါတယ်။ သူတို့က အားလုံး ပါဝင်နိုင်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရေးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို လွှတ်ဖို့၊ ဒီလိုကိစ္စတွေ အားလုံးအတွက်က အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်ဖို့ သူတို့ အကြံပြုပြောကြားခဲ့တယ်။”
ဒါ့အပြင် လက်ရှိ NLD က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ပြောဆို ဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ကျနော်တို့ NLD ရဲ့ အခြေအနေတွေ၊ NLD လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေ ဒါတွေကို ဆွေးနွေးပြောကြတာပဲ။ ပြောတာတော့ အများကြီးပဲ။ အဓိကကတော့ ခုနက အချက်တွေပါ။”
စစ်အစိုးရဘက်က ဘယ်လောက် အဆင့်ရှိတဲ့အရာရှိတွေနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်၊ ဘယ်သူနဲ့ တွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့ဖက်က အသိမပေးခဲ့ဘူးလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး မှတ်ပုံမတင်ဖို့ NLD ပါတီက ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာက သံတမန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို အ၀င်အထွက်လုပ်တာ အတော်လေး စိပ်လာနေပါတယ်။ မနေ့ကပဲ အီးယူနိုင်ငံတွေက သံတမန်တွေ NLD ခေါင်းဆောင်တချို့ကို ဂျာမနီသံရုံးမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်။
ဒီကနေ့လဲ ကနေဒါအစိုးရ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန အရာရှိနဲ့ သံရုံးအရာရှိတွေ NLD ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးအိမ်မှာ လာရောက်တွေ့ဆုံတာမို့ ဒါဟာ ဘယ်လို ထူးခြားချက်များ ဖြစ်နိုင်မလဲလို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ -
“ကျနော်တို့ မြင်တာကတော့ဗျာ၊ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခြေအနေက သာမန်မဟုတ်ဘူး။ ထဲထဲဝင်ဝင် ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့ ဒီလက္ခဏာတွေ ပေါ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီသဘောလို့ ထင်ပါတယ်။”
NLD ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြောပြခဲ့တာပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံက လောလောဆယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံရုံးဖွင့်ထားတာ မရှိတဲ့အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကနေဒါသံရုံးကပဲ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီကနေ့ NLD ကို လာတွေ့ကြတဲ့ သံရုံး အရာရှိတွေဆိုတာကဲ ဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့ ကနေဒါသံရုံးက အရာရှိတွေဖြစ်ပါတယ်။
ကနေဒါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး NLD ပါတီခေါင်းဆောင်များနှင့်တွေ့ဆုံ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပါတီကို နောက်ထပ် မှတ်ပုံမတင်သလို ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာတွေကို ကနေဒါအစိုးရက လေးစားကြောင်း၊ ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာတွေ ဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်ဆိုတာ သိချင်ကြောင်း၊ ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန အရှေ့တောင်အာရှရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး မစ္စစ် နာဒီယာ ဘာဂါက အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
မစ္စစ် နာဒီယာ ဘာဂါ နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ ကနေဒါသံရုံးက ပထမအတွင်းဝန် မစ္စစ် အေမီတို့ နှစ်ဦးက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦး၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းတင်၊ ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့နဲ့ ဦးတင်ဦးအိမ်မှာ ဇွန်လ ၁၈ ရက် ဒီနေ့မနက် တွေ့ဆုံပြီး ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက RFA ကို အခုလို ပြောပါတယ်။
'သူတို့ အစိုးရအနေနဲ့တော့ NLD ရဲ့ ဆုံးဖြတ်တာတွေကိုလည်း သူတို့ လေးစားတယ်၊ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း အားလုံး ပါဝင်နိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းထားတယ် ဆိုတာတွေကို ပြောပြတယ်။ သူတို့ကလည်း မေးပါတယ်၊ ကနေဒါအစိုးရအနေနဲ့ ဘာလုပ်ပေးစေချင်သလဲ ဆိုတော့ က္ဆွန်တော်တို့က ပြောပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ တခုတည်းနဲ့ ဗမာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်၊ အဓိကအားဖြင့်တော့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပဲ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါ အမျိ်ုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် dialogue လုပ်ဖို့ကို တိုက်တွန်းသင့်တယ်လို့ က္ဆွန်တော်တို့ အကြံပြုပါတယ်။ သူတို့ကလည်း သဘောတူပါတယ်။ ဒီလို သဘောထားမျိုး သူတို့မှာလည်း ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောပါတယ်။'
ကနေဒါ သံအရာရှိတွေဟာ စစ်အစိုးရ အရာရှိတွေနဲ့လည်း ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လုပ်သင့်ကြောင်းနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အားလုံး ပါဝင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ စစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး လွှတ်ပေးဖို့ လိုလားကြောင်းလည်း အဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောပြတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
'သူတို့က နေပြည်တော်မှာလည်း တာဝန်ရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ တွေ့လာတယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို သူတို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ သူတို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွှတ်ဖို့နဲ့ က္ဆွန်တော်တို့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အားလုံး ပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကို လိုလားကြောင်း သူတို့ ပြောပါတယ်။'
ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကနေဒါသံအမတ်ကြီး ရွန်ဟော့ဖ်မန်း Ron Hoffmann ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၂၂ ရက်နေ့က ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပေမဲ့ ခုချိန်ထိ ဖြစ်မလာသေးတဲ့အတွက် စိတ်ပျက်မိတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇွန် (၁၉) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၆၅) နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အမှတ်တရ အမှာစကားများအား ခေတ်ပြိုင်မှ စုစည်းတင်ပြချက်။
ဦးတင်ဦး (ဒု- ဥက္ကဋ္ဌ) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
ဦးဝင်းတင် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
“ရဲ … ဇွဲ … ဉာဏ် … စည်း …တာ၊ မကြောက်တရား တေးကဗျာ … မီးလျှံထဲက ကြာ”
ဦးဉာဏ်ဝင်း (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
ဦးအုံးကြိုင် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
ဒေါက်တာမေ၀င်းမြင့် (ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
မဖြူဖြူသင်း (ရန်ကုန်တိုင်း ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင်) အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ)
ဦးအေးသာအောင် (အတွင်းရေးမှူး) ရခိုင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အေအယ်လ်ဒီ)
Women’s Freedom Vigil (June 17 , 2010 ) photos
single Photos Download Here
Women’s Freedom Vigil _June 17 , 2010 _ photos.pdf file download here
Women’s Freedom Vigil _June 17 , 2010 _ photos
BY Thadar (မသဒ္ဓါ ) ... 6/18/20100အကြံပြုခြင်း
မြန်မာစစ်တပ် အနေဖြင့် နယ်ခြားစောင့်တပ် အာခံနေသည့် ...